-Dhacdo Shiinaha wareega qaab jaban ubax alwaax jaraa'id warshad jumlada iyo saarayaasha |Huiyang
Meesha Asal ahaan:
Midabka Dabiiciga ah
MDF oo leh lakab alwaax ah
Gacan lagu sameeyay
USD5000.00 shixnad kasta ee alaabta isku dhafan waa la aqbalay
20000 Qaybaha/Qeybaha bishii wareega ayaa qaabeeya jumlada jaraa'id ee ubaxa oo jaban
Baakadaha & Bixinta
48X32X48cm / 20pcs ee qaabka wareega ah ee daabacaadda alwaax jaban
Tirada (Qeybaha) 1 - 1000 >1000
Est.Waqti (maalmo) 45 In laga wadahadlo
17 sano FSC soo saaraha shahaadeysan, 14 sano alaab-qeybiye Alibaba Dahab ah
Paulownia wd, Pine wd, poplar wd, alwaax Beech, alwaax, MDF
Nidaamka Kormeerka Saddex-geesoodka ah
1.Xulashada alaabta ceeriin
2. La socodka dhammaan habka
3.Checking pc by pc
Xardhay, Xardhay, xaradhka laysarka, Rinjiyeyn, midab la dheehday, olol gubanaya
Qiyaastii 3-5 maalmood
Waqtiga Hogaaminta Wax-soo-saarka:
Qiyaastii 35-45 maalmood
USD1000.00 shayba iyo USD5000.00 shixnad kasta.
Xirmooyinka caadiga ah: warqad cad, warqad xumbo EPE, bac xumbo, baakad finan ah, sanduuqa dalbashada boostada, sanduuqa gudaha, sanduuqa farsamada midabka, 5 lakab oo kartoon jiingado ah.Baakadaha la habeeyey waa la soo dhaweeyay.
T/T, L/C, Paypal, Western Union, Hubinta Ganacsiga Alibaba.
Wax soo saarka Specifica
S: Ma waxaad tahay shirkad wax soo saar leh ama shirkad ganacsi.
J:Waxaan nahay shirkad FSC shahaado ka haysais dhexgalka warshadaha iyo ganacsiga, 14 sano Alibaba Golden Supplier.Inta badan ku hawlan dhammaan noocyada kala duwan ee sanduuqa alwaax iyo alwaax.
S: Sideen ku garan karaa tayadaada
A: Sawirro tafatiran oo xalal sare ah iyo muunado ayaa awood u yeelan doona inay xaqiijiyaan tayadayada.
S: Marka hore ma heli karaa muunad?Sideese muunad loogu dalaci karaa?
J: Muunad yar oo fudud ayaa bilaash ah waxaana lagu dhejiyaa xamuulka ama la sii bixiyay.Muunada la soo dalacday waa la soo celin karaa marka dalabku yimaado.
S: Miyaad samayn kartaa naqshadeynta macmiilka?
J: Nakhshad la habeeyey iyo cabbirro waa la soo dhawaynayaa.Waxaan aqbalnaa OEM.
S: Sideen wax u bixiyaa?
J: Waxaan aqbalnaa paypal, midowga galbeedka, si toos ah bangiga ugu wareejinta akoonkeena shirkada iyo aragtida LC.Haddii kor aan dhammaan la heli karin, waxaan ku siin doonaa qaansheegta paypal oo aad si fudud ku bixinayso kaarka deynta.
S: Waa maxay faa'iidada ugu jirta soo dejinta ama qaybiyeyaasha muddada dheer?
A: Macaamiishaas caadiga ah, waxaan bixinaa qiimo dhimis cajiib ah, muunad maraakiib bilaash ah, muunad bilaash ah oo loogu talagalay naqshadaynta gaarka ah, baakadaha gaarka ah iyo QC sida shuruudaha gaarka ah.
S:Ma heli karaa adeeg albaab ka albaab ah?
J: Haa, waxaan ku siin karnaa adeega albaabka ilaa albaabka.
Hore: Jumlo kalandarka alwaax dabiici ah oo lagu rakibay gidaar gaar ah
Xiga: caadadii aan dhammayn garaac guriga caruusada alwaax jumlo